အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာ ငြိမ်းချမ်းရေးထိန်းသိမ်းမှု စစ်ရေးလေ့ကျင့်ခြင်း တရုတ်နိုင်ငံ အလယ်ပိုင်း၌ ပြီးဆုံး - Xinhua News Agency
ကျန်းကျိုး ၊ စက်တင်ဘာ ၁၅ ရက်(ဆင်ဟွာ)
တရုတ်တပ်မတော်က စီစဉ်ကျင်းပသည့် “ကံကြမ္မာအကျိုးတူဖော်ဆောင်ခြင်း-၂၀၂၁” ဟု အမည်ရသော အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာ ငြိမ်းချမ်းရေးထိန်းသိမ်းမှု စစ်ရေးလေ့ကျင့်ခြင်းသည် စက်တင်ဘာ ၁၅ ရက်တွင် တရုတ်နိုင်ငံ အလယ်ပိုင်း ဟဲနန်ပြည်နယ် Queshan ကောင်တီရှိ လေ့ကျင့်ရေးစခန်း၌ ပြီးဆုံးသွားခဲ့ကြောင်း သိရသည်။ဗဟိုစစ်ကော်မရှင်(CMC) အဖွဲ့ဝင် နှင့် ဗဟိုစစ်ကော်မရှင်ပူးတွဲစစ်ရေးချုပ်ရုံး၏ စစ်ဦးစီးချုပ် Li Zuocheng က လေ့ကျင့်မှုအမျိုးမျိုးအား ကြည့်ရှုခဲ့ပြီး ပိတ်ပွဲအခမ်းအနားသို့ တက်ရောက်ကာ စစ်ရေးလေ့ကျင့်မှု အဆုံးသတ်ခြင်းအား ကြေညာပေးခဲ့သည်။
နံနက် ၉ နာရီအချိန်တွင် စတင်ခဲ့သည့် အမျိုးမျိုးသော လေ့ကျင့်မှုများတွင် တရုတ် ၊ မွန်ဂိုလီးယား ၊ ပါကစ္စတန် နှင့် ထိုင်းနိုင်ငံတို့ အပါအဝင် နိုင်ငံများမှ အရာရှိ နှင့် စစ်သည် ၁,၀၀၀ ကျော် ပါဝင်လုပ်ဆောင်ခဲ့ကြောင်း သိရသည်။
ပူးတွဲကွပ်ကဲမှုလက်အောက်တွင် အရာရှိ နှင့် စစ်သည်များသည် ယာယီစစ်ဆင်ရေးစခန်းများ တည်ဆောက်ခြင်း ၊ ကင်းလှည့်ခြင်း ၊ လက်နက်ကိုင်အစောင့်အရှောက် ၊ အရပ်သားများအား ကာကွယ်စောင့်ရှောက်ရေး နှင့် အကြမ်းဖက်မှုအား တုံံပြန်ရေး နှင့် အကြမ်းဖက်တိုက်ခိုက်မှုကဲ့သို့ လုပ်ငန်းတာဝန်များကို ဆောင်ရွက်ခဲ့ကြောင်း သိရသည်။
စက်တင်ဘာ ၆ ရက်တွင် စတင်ကျင်းပခဲ့သော အဆိုပါလေ့ကျင့်မှုသည် ကုလသမဂ္ဂတွင် တရုတ်ပြည်သူ့သမ္မတနိုင်ငံအဖြစ် တရားဝင်ကိုယ်စားပြုမှု အသိအမှတ်ပြုခြင်းခံရသည့် နှစ် ၅၀ ပြည့် အထိမ်းအမှတ်အတွက် အရေးပါသော ထောက်ခံအားပေးမှု တစ်ခု ဖြစ်ကြောင်း သိရသည်။
လေ့ကျင့်မှုအတွင်း နိုင်ငံအသီးသီးမှ ပါဝင်သော တပ်ဖွဲ့ဝင်များသည် ပူးတွဲစစ်ရေးလေ့ကျင့်မှု ၊ အနီးကပ်ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ခြင်း နှင့် အပြန်အလှန် သင်ယူခြင်းတို့အား ဆောင်ရွက်ခဲ့ကြောင်း သိရသည်။
ယင်းလေ့ကျင့်မှုသည် တာဝန်များအား ထမ်းဆောင်ရာတွင် ငြိမ်းချမ်းရေးထိန်းသိမ်းမှု အသင့်အနေအထားရှိသော တပ်ဖွဲ့များ၏ စွမ်းရည်အား အကဲဖြတ်ရန် နှင့် တိုးတက်စေရန် ကူညီပေးခဲ့သည်။ ယင်းမှာ ပါဝင်သော တပ်ဖွဲ့ဝင်များအကြား ဖလှယ်မှု ၊ အပြန်အလှန်ယုံကြည်မှု နှင့် လက်တွေ့ကျသော ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မှုကို မြှင့်တင်ပေးကြောင်းလည်း သိရသည်။ (Xinhua)
Int’l peacekeeping drill concludes in central China
ZHENGZHOU, Sept. 15 (Xinhua) — “Shared Destiny-2021,”amultinational peacekeeping live exercise organized by the Chinese military, concluded atatraining base in Queshan County of central China’s Henan Province on Wednesday.
The exercise, which kicked off on Sept. 6, is an important supporting event to commemorate the 50th anniversary of the restoration of the lawful seat of the People’s Republic of China in the United Nations.
Photo – Peacekeepers participate in an international peacekeeping drill atacombined-arms tactical training base of the Chinese People’s Liberation Army (PLA) in central China’s Henan Province, Sept. 7, 2021. China started holding an international peacekeeping drill code-named “Shared Destiny-2021” on Sept. 6.
Drills of battlefield reconnaissance, security guarding and patrol, armed escort, protection of civilians, response to violent and terrorist attacks, construction of temporary operation base, battlefield first aid, and pandemic control are expected to be conducted. (Xinhua/Liu Fang)